Nzira Yokudzivirira Sei Kuwana Infect Ransomware? - Semalt Inopa Mhinduro
Frank Abagnale, iyo Semalt Mutevedzeri weVatengi vanobudirira, inotaura kuti rudzikinuro iyi inonyanya kufanana nehuwandu hwemapurogiramu anoshungurudza vanotambudzirwa uye inodzivisa kusvikidzirwa kwekombiyuta kusvikira vabhadhara rudzikinuro. Kurwiswa kwakadaro kunoitwa nekubatsirwa kweTrojans iyo vakawanda vanoshandisa vashandisi kumitemo yavo vachizviona zvinhu zvechokwadi uye zvakakodzera. Mumwedzi ichangopfuura, software yakaipa yakakanganisa nhamba yakawanda yemakombiyuta pasi rose. Mahofisi ekuchengetedza maSofisi anoti mahwendefa ekudzikinura anonzi WannaCry ane utachiona hunopfuura 140 000 makombiyuta emakombiyuta munyika dzinopfuura mazana maviri, pamwe neUkraine, Taiwan, neRussia ndiyo inonyanya kudiwa. Zvimwe zvipatara zveBritish zvakabudisa makombiyuta avo, uye mamwe makambani eSpain akadai seTelfonica, uyewo mamwe masangano ehurumende uye mabhizimisi akabatwa nehuwandu hwemazana. Nyanzvi dzinobva kuKaspersky Lab uye Symantec dzinodaro kuti mhembera dzekare muWannaCry shanduro dzakabuda muLazaru Group mapurogiramu mune nhamba huru - new cloud computing companies. Aya aya maiva nemavirusi uye ane utachiona huwandu hwakawanda hwezvikomborero zveNorth Korea. WannaCry yakakanganisa yakawanda ye-smartphone uye makombiyuta kusvikira zvino, Kaspersky Lab nyanzvi Kurt Baumgartner akati mune imwe hurukuro neReuters.
WannaCry ndeimwe yenzira dzekutanga dzekudzikinura dzinogona kuvhara mafaira ako kombiyuta. Iko inobatanidza deta yako zvachose, uye iwe unorasikirwa nekuwana kwako kune imwe yako kusvikira rudzikinuro rwabhadharwa. Izvi zvinyorwa zvinokonzera vashandisi veMicrosoft uye avo vari kushandisa Windows neLinux. Apo sarudzo yako inogadziriswa neWannaCry, uchaona mahwindo epamusoro mune nhamba inokosha..Vaseki vanopa mirayiridzo yekuti vangabhadhara sei rudzikinuro rwemahwindo aya, uye rudzikunuro runosvikira $ 3000 pamutambo. Aya ma-pop-ups anoratidzawo maverengi countdowns: rimwe rawo rinoratidza zuva remazuva mana kusati kwabhadharwa kaviri, asi imwe yacho inoratidza chikamu chemazuva makumi matatu zvimwe iwe ucharasikirwa nedota yako nokusingaperi. Vashandi vanobvuma kubhadhara chete kuburikidza neBitcoin uye PayPal. Rimwe boka rakakurumbira rinotyisa, Shadow Brokers, rakabudiswa iyi iyi malware uye yakarwisa nASA yekuchengeteka.
Iyo inopararira sei?
Kazhinji kacho, kuregererwa kunopinda mumakombiyuta yako kana kuburikidza nekukanda mafayela ane utachiona kana kuvhara unhu husingazivikanwe kana husingazivikanwi. Vamwe vezvenyanzvi dzekuchengetedza vanoti hutachiona hwakafanana neWannaCry inopararira nenzira yehonye; mukati memazuva mashomanana, vanokonzera kakombiyuta yako chipikicha uye vanopinda zvese zvayo. Mapurogiramu akadaro anonyorawo data yako, uye vanokumbira vanoda kubhadhara mari vasati vakuita kuti uwanezve kuwana.
Vanotsvakurudza vanobva kuTaiwan, Ukraine, neRussia vave ndivo vavariro huru yevanorwisa, asi dzimwe nyika dzakawanda dzakashumawo zvirwere zvinotapukira.
James Scott weCritical Infrastructure Technology yakataura kuti rudzikinuro rwakatanga kupararira muna 2016, uye rwakatapira huwandu hwemakombiyuta muzvipatara.
yeMicrosoft Malware Protection Centre inoshuma kuti iwe unofanira kuisa nekutsvaga zvishanduro zvekupedzisira zvekuvharavira kwevhidhiyo. Zvakakoshawo kuti iwe usanamatira pazvibvumirano zvisingazivikanwi uye usazarura zvinyorwa zvimiridzo zvakabva kuvanhu wausingazivi. Vanhu vanofanira kutora software yavo yehutachiona pavanenge vachitsvaga internet, uye vanovhara pop-up anowedzera kuitira kuti varambe vakachengeteka nguva yose. Iwe unofanirawo kuchengetedza mafaira ako nguva dzose kudzivirira zvirwere.